कसरी एक विषाक्त सम्बन्ध को पछि सामना गर्न बेजिया
दुर्भाग्यवस, विषाक्त सम्बन्धहरू दिनको उज्यालोमा छन् र यो जीवनमा कहिलेकाहीं यो भोगेको छैन कि व्यक्ति विरलै छ। यस प्रकारको सम्बन्ध परिवार, व्यक्तिगत वा कार्य वातावरणमा देखा पर्न सक्छ। जोडीको मामलामा, एक विषाक्त सम्बन्ध राख्नुको कारण बन्धन कमजोर बनाउँछ र स्थिति अस्थिर हुन सक्छ।
यस प्रकारको सम्बन्धको नतिजा र नतिजा निकै गम्भीर छन्, विशेष गरी मानसिक वा भावनात्मक पक्षको सम्बन्धमा। अर्को लेखमा हामी एक विषाक्त सम्बन्धको परिणामहरु र उनीहरुलाई कसरी पराजित गर्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं।
1 एउटा विषाक्त सम्बन्धको परिणाम के हुन्?
2 एउटा विषाक्त सम्बन्ध समाप्त भएपछि के गर्ने
एउटा विषाक्त सम्बन्धको परिणाम के हुन्?
अर्को व्यक्तिसँग विषाक्त सम्बन्ध राख्नु दम्पतीको लागि खराब हो र परिणाम बिस्तारै पनी जारी रहन्छ सम्बन्ध विच्छेद भए पनि। धेरै व्यक्तिको मानसिक र भावनात्मक अवस्था अत्यन्त गम्भीर र गम्भीर रूपमा बिग्रिएको छ।
धेरै जसो विषाक्त सम्बन्धमा पीडित र पीडित व्यक्तिले त्यस्ता गम्भीर परिणामहरू भोग्छन् जस्तै चिन्ता, उदासीनता, वा एक नष्ट आत्म-सम्मान। यस प्रकारको सिक्वेले सीधा व्यक्तिको मानसिक अवस्थालाई असर गर्छ। यदि यी सिक्वेलीलाई उनीहरूले जस्तो व्यवहार गरेनन भने, जसले उनीहरूलाई कष्ट दिन्छ उसले विषाक्तता विकसित गर्न सक्छ जुन अन्य व्यक्तिहरूसँग भावी सम्बन्ध बिगार्न समाप्त हुन्छ।
पहिलो व्यक्तिले गर्नै पर्ने कुरा भनेको उनीहरू एक विषाक्त सम्बन्धमा छन् भनेर निश्चित गर्नु हो त्यसो भए सम्भव भएसम्म यस्तो सम्बन्ध छोड्नु आवश्यक छ। यद्यपि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको सकारात्मक तरीकाले विभिन्न विषाक्त भावना र भावनाहरूको साथ व्यवहार गर्नु हो।
एउटा विषाक्त सम्बन्ध समाप्त भएपछि के गर्ने
एक विषाक्त सम्बन्ध छोड्न को मामला मा, यो राम्रो हुन्छ तपाईलाई आफु संग राम्रो हुन मद्दत गर्ने सुझावहरुको एक श्रृंखला अनुसरण गर्न:
तपाईंको घनिष्ठ मित्र र परिवारको सर्कलमा झुकाव।
केही ध्यान वा विश्राम अभ्यास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ती सबै नकारात्मक विचारहरूबाट टाढा जान मद्दतको लागि।
केही समय एक्लै लिन सल्लाह दिइन्छ अर्को सम्बन्धमा संलग्न हुनु अघि।
यदि तपाईंले याद गर्नुभयो कि तपाईंको भावनात्मक अवस्था राम्रो छैन भने, आफैंलाई पेशेवरको हातमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंले दोषीको सम्भावित भावनालाई हटाउनुपर्दछ र अगाडि सकारात्मक हेर्नुहोस्।
नयाँ साथीहरू बनाउन प्रयास गर्नु राम्रो हो। तपाईंलाई विगतको जीवन भुल्न सहयोग गर्न।
अन्तमा, कोपिलमा एउटा विषाक्त सम्बन्ध चुपचाप कसैको लागि सजिलो काम छैन। तर त्यसो गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तपाईले देख्नु भएको छ यसको परिणाम र परिणाम जस्तो विषाक्तता गम्भीर छन्। धेरै अवसरहरूमा, प्रभावित व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिको सम्बन्ध भित्र हुने घटनाहरूका लागि दोषी भावना उत्पन्न गर्दछ। आफैलाई सबै कुराको लागि दोष दिने जहिले पनि टाढा रहनुपर्दछ आफैंमा, यो भावना विषाक्तिको अर्को रूप हो जुन हटाउनुपर्दछ। सम्भावित सिक्वेलीको उपचार महत्वपूर्ण छ ताकि प्रभावित व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई पुन: निर्माण गर्न सक्दछ र स्वस्थ प्रकारको सम्बन्धको आनन्द लिन सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » मनोविज्ञान » एक विषाक्त सम्बन्ध पछि को सामना कसरी गर्ने